From baabuurta driverless in jetpacks - Rule News
From baabuurta driverless in jetpacks
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “From baabuurta driverless in jetpacks: kulmi hakadaan hal casriga eedeega” waxaa qoray Andy Meek, waayo theguardian.com on Saturday 14 November 2015 14.13 UTC
wax soo saarka flagship Martin Diyaaradaha Company ee ku salaysan Zealand New waa mashiinka duulaya caadi ahayn: jetpack a in laga yaabo in u muuqdaan sida xoojinaya oo ka movie Sayniska-fi a, Jirin xaqiiqada ah in ay si wanaagsan on wadada ilaa iyo ganacsi.
Bishii Oktoobar, amar Duulista New Zealand ee ka bariyeelay shirkadda ee string 12 model jetpack duulimaadyada duuliyo. jetpack taageere laga gano The, marka lagu muujiyey in June at Air Paris ka Show, xumaada yaabaa dhow 1,000 mitir oo kor u duulo nus saac ah. jetpacks shirkadda ayaa la filayaa in ay noqon ganacsi laga heli karaa mararka qaar in qeybtii labaad ee 2016.
horumarinta jetpack waa hal tusaale oo ka mid ah fikradaha weyn iyo khamaar weyn lagu sameeyey guud ahaan shirkadaha gaadiidka-diiradda, halkaas oo shirkadaha sida Martin Diyaaradaha yihiin inaan orotonno Waxaana si cidhifyada fog waxa macquul. Waxaan ku nool nahay Daqsintiina of waqti marka baabuurta ay noqon doontaa "si buuxda u goboleedka in muddo dheer", sida laga soo xigtay agaasimaha Tesla Eeloon Miski. In call a la saamileyda baabuur koronto bishan, ayuu qaaday oo siiyey 15 in 20 sano.
Waxaa jira badan oo ganacsi gaadiid kale oo qorshe la mid ah khayaali ah ee iyaga u gaar ah, ka spaceships in loo sameeyo duulimaadyo suborbital in diyaarado in off la qaado oo dhulkii vertical.
The Guardian-ka gaareen soo baxay si uu dhowr ka mid ah hal kuwaas oo si aad u hesho dareen ah halkaas oo mustaqbalka ee gaadiidka waxaa madax u. Waxaan weydiiyay sida ay ka qabashada caqabadaha farsamo soo jireenka ah iyo sababta ay u go'aansadeen in ay galaan meel this in meesha ugu horeysa. Waxa aan helay waa yididiilo xoog leh mustaqbalka dhow meesha xirayaan on jetpack in ay noqon karto sida caadiga ah sida helitaanka isteerinka.
Martin Diyaaradaha ayaa qorshaynaysa in ay bilowdo oo ay jetpack qeybtii labaad ee sanadka soo socda. Shirkadda bixiyay Guardian la video bandhig this.
Martin Diyaaradaha CEO Peter Coker ogyahay uu ganacsi muuqan laga yaabaa in lagu dhisay on aragti fantastik ah aan awoodi karo.
"Wiilkayga kii i soo dhaadhiciyay inuu u dhaqaaqo shirkadda Waxay ahayd,"Ayuu yiri Coker, inkastoo caqabadaha. "Waxaan fasax, iyo wiilkayga, oo u shaqeeya shirkad maalgashi Olimpico ee London, kasbatay tilmaamay: 'Waa maxay sababta aan aad rabto inay lug ku isbedelka ugu weyn ee duulimaadyada ee qarnigii la soo dhaafay?' "
In si dhaqso ah si aad u hesho jetpacks ay suuqa, 2015 wax la gu jir ah oo qeexaya shirkadda, taas oo uu leeyahay in bilihii la soo dhaafay soo dareysa heshiisyo, iskaashiga iyo faanayaan design in ay macaamiisha. Waxaa la balaadhiyay si ay 53 qof oo ku nool 13 Jinsiyadaha oo waxaa ku qoran stock exchange Hong Kong ka.
Isagoo tilmaamaya mustaqbalka jetpacks, Coker envisions "highway ah oo cirka jooga" ama "aragti afraad ee gaadiidka", halkaas oo qofka caadiga ah si degdeg ah u safri karaan hal dhibic si ay kale.
"Waxaan si deg deg ah xaqiiqsadeen utility ku wareegsan wax sidan oo kale waa ka sii badan tahay oo kaliya jetpack shakhsi,"Ayuu yiri Coker, a Lockheed Martin fulinta hore. "Waxaan sidoo kale u arkaan fursad ay waaxda ganacsiga - batrool iyo gaas, macdanta iyo beeraha. "
Fikradda ah jetpack duulaya muuqan yaabaa in sida iibiyay a adag tahay in la maal-shaki iyo laga yaabee buundo aad u fog, waayo, wada-hawlgalayaasha ka iman kara iyo macaamiisha. Laakiin Coker ayaa sheegay in kaliya arkaya wax ku caawin kara Ku Guuleysato sale a. Marka uu shirkadda muujinaysaa sawir ama video of fikradda ama bandhigaysaa noocooda ah in tallaabo, Coker oo sheegtay in ay "si degdeg ah ku kicin kara riyo aan ku lahaa markii aan caruur ahaa". In siyaabo qaar ka mid ah, ayuu yidhi, helitaanka in iibsan-in uu yahay qayb ka mid sahlan.
Waxaa hubaal ah ayaa ka yar adag ka yoolakan caqabadaha farsamo jireenka ah in la Timid dhisidda nidaam oo ay ku jiraan engine gaaska ah iyo laba taageerayaasha bixiya wiishka loo baahan yahay.
"Marka aad qaadato dadka iyada oo loo marayo falsafadda ah sida ay u hawlgasho - sida oo dhan tabo cusub wanaagsan, waa bixinta a adag in muuqataa fudud - waxay aad u hesho,"Coker ayaa sheegay in. "Waxay heli utility waxaa ka mid ah, oo mar kasta oo aan tago waa meel soo bandhigaan, qof ayaa sidoo kale ku yimaado ilaa qaar ka mid ah hab oo kala duwan si ay u isticmaalaan. "
Fikradda Next lug qeybiyo goboleedka in hadal kasta oo kale oo. naqshadeeye Industrial Tommaso Gecchelin bixiyo Guardian la haya'ad this.
tabo cusub Gaadiidka sida jetpacks ka qaadato on noocyo kala duwan oo noocyo kale - qaar ka mid ah kordhiyo, groundbreaking qaar ka mid ah.
technology baabuur Driverless waa mid ka mid ah qaybaha ugu kulul xilligan, soo saareyaasha ka Ford in Mercedes-Benz samaynta riwaayadaha casriga driverless. Dareemayaal iyo awoodaha caawiya sidoo kale ka mid ah mawduucyada ah Intelligent Society Gaadiidka of America ayaa colka wararka Gaadiidka Next waxay ahaayeen 30 shirwaynaha Years bishii October ee Washington DC.
riix The xagga madaxbannaani waa wadnaha ee xalkaas ka badan hadda gaadiidka. Warqad saamiga quarter saddexaad Tesla ee la sii daayay 3 November, shirkadda qoray in, "Macaamiisha Our eryay baabuur ay ku dhowaad 250 miles quarter this, waayo, wadar ahaan ku dhowaad 1.5 miles taariikhda. "Tesla, warqadda tagaa on, ayaa isha ku maalintii "marka aan kuu sheegi karaa ilaa inta baabuurta aannu u kexeeyey macaamiisheena".
mustaqbal noocan oo kale ah waa in natiijadeeda la injineer Talyaani iyo naqshadeeye warshadaha Tommaso Gecchelin a. Waxa uu sketched baxay fikrad qaybsan wuxuu u yeedhayaa Next in qoreysa waa maxay qeybiyo muhiimad korontada isku xidha karo iyo barkinta in lagu qeybiyo kale sida loogu baahan yahay, sida qaar ka mid ah tareenka higayaa in bilaabi kartaa yar oo u koraan si loo ballaariyo, qalab muusiik-style.
"Iyada oo ku saleysan our technology iyo user u baahan falanqaynta isbeddellada … waa mid aad u badan tahay in mustaqbalka waan arki doonaa Qaybinta a kacaan suuqa gaadiidka,"Gecchelin sheegay. "On hal dhinac, baabuurta aadanaha-driven noqon doonaa sida fardo ula dhalashada baabuurta motorka. Sidaas baabuurka isboortiga noqon doonaa caan ah, halka baabuurta magaalada noqon doonaan in ka yar la doonayo, siinayo boos dheeraad ah in nidaamka gaadiidka caaqil in ku siin doonaa badan oo faa'iido leh iyo fulinta … safri iyo jeebkayga waayo-aragnimo. "
Wuxuu envisions uu fikradda Next sida ka badan model rakaabka ah. Waxa ay labanlaabmi karto sida nidaamka adeeg bixinta a, ganacsiyada kiraysato ama lahaanshaha qeybiyo of iyaga u gaar ah oo u diraya iyaga ku raran yihiin alaabo ay guriga macaamiisha ah ee.
Gecchelin ayaa sheegay in uu bilaabay fekerayo xal u janjeedha agagaarka "shaqada, firaaqada iyo baahida adeegyada [halkii] ayna gaadiidka ". Xilligan la joogo, uu raadinaya maalgalin in ay oggolaadaan in soo saaridda of raxan ugu horeeyay ee ra'yiga u muujisid in dunida dhabta ah. Waxa uu hadda ka hadlayaa leh magaalooyinka Jarmal dhowr ah oo ku saabsan iskaashiga ka iman kara.
"Tani waa waxa robotics iyo farsamooyinka is driving waxay keeni doontaa in,"Ayuu yidhi. "Sirdoonka iyo isku wadida furo suurtogalnimada baabuurta in ay la shaqeeyaan si sax ah sida ay dhacdo oo la Next."
Kale oo aan ahayn caqabado farsamo, mid ka mid ah caqabadaha ugu weyn ee jidka tabo cusub sida ku taagan tahay waa status quo. Ku dhawaad ​​17 baabuurta cusub la iibin doonaa, oo ka dhacay wadooyinka ee Mareykanka sanadkan - gaadiidka aan ugu dhakhsaha badan tegi doonaa hab xagjirka cusub oo aad ka hal dhibic si ay u soo socda.
Elio Motors ayaa ka shaqaynaysa si loo hagaajiyo gaariga oo leh saddex taayir leh, Ra'yiga mooto u eg. Shirkadda bixiyo Guardian la this video xayaysiis.
In isku day ah in innovate in wada noolaanshaha la status quo, Paul Elio hindisaa utility ee gaariga flagship uu shirkadda ee wax u eg iPad ah. In si la mid ah kiniin ayaa xaqiijiyey in ay noqon dilaaga PC a laakiin halkii dhameystirta kala duwan ee hadda jira ee qalabka isticmaala ', Elio arkaa gaari uu shirkadda ee sida wax u eg iPad ah garaashka macaamiisha ah ee. Phoenix-ku saleysan Elio Motors waxaa qaadashada amarada hadda ay saddex-shaag, mooto u eg baabuur in uu helo 84 miles u galaan, taas oo ay qorshaynayso in ay sii daayaan sanadka soo socda la awoodi karo ah $6,800 qiimaha tag.
"Waxaan qabaa in wax sidan oo kale in ay ku dhacaan,"Ayaa sheegay in Elio, shirkadda, kuwaas oo hore u leedahay in ka badan 47,000 Boos ay gaari. "Waxaan ku noolaa City New York ah ilaa hal sano iyo badh, halkaasna ayaan ku jeclaaday nidaamka tareenka ee. Marka aad dadka size in, shuqullada mass transit.
"Waayo, inta kale ee dalka, waxaan iska cad midkood u baahan tahay in ay ku burburiyaan oo dhan agagaarkeedii iyo abuuro xarumo dadka waa weyn ama ogaado hab wax ku ool ah si aad u hesho ka agagaarkeedii si hoose halkaas oo aanu u shaqayno. "
alaabta noocooda Elio ayaa farsamo ahaan lagu tilmaamay inay mooto, laakiin ay timaado la waxyaabaha u ekaayeen daaqadahaas kale awoodda, qaboojiyaha, baagaga hawada iyo albaabada qufulka awood, oo dhan ee jidhka ah ku lifaaqan. baabuurta ayaa laga soo saari doonaa by Elio in Shreveport, Louisiana, xarunta soo-saarka hore General Motors.
"Waxaa la helay in ay noqon low-kharashka iyo-masaafada sare - waxa uu helay in ay labaduba ka mid ah kuwa shaqada ku noqon,"Ayuu yidhi. "Tani waa 'iyo' la doortay, aan ah 'ama' doorasho. Sidaas fikradda waa aad ka iibsan gaariga weyn ee sababta aad u soo iibsaday, iyo sidoo kale aad qabto Elio ah. Waxaad u kaxayn Elio in ay ka shaqeeyaan, oo Sabtidii inaad qaado SUV. "
Elio ayaa sheegay in uu go'aansaday in aan bilowno uu shirkadda iyo in la dhiso uu gaari u gaar ah ka dib markii uu ku nool iyada oo lama filaan ah dhaqaalaha 2008 - Intaa waxaa dheer in uu aaminsan yahay in ganacsiga kuwa iibiya ku salaysan gaariga waa mid ka mid ah "gamesmanship" iyo dhaqaalaha oo aan in qofka raallinimadiisa. Mid ka mid ah waxyaalihii uu si dhaqso ah u bartay wuxuu dhigay saabsan bilaabay Elio Motors waa in wax yar yihiin sida ben ku adag tahay ganacsadaha ah sida isku dayaya inuu ku soo bilowdo shirkad cusub baabuur.
"Waxaa jira caqabado badan si uu galo in meel bannaan oo this badan wax kale oo aan ahay ogyahay,"Elio ayaa sheegay in. "Haddii aad qaadato Tesla soo baxay wada-, qof ee la soo dhaafay markii abuuray shirkad guul gaari America in uu wali socda jiray Walter P Chrysler ee 1925. "
Back u dhicii, marka "qiimaha saliidda socday saqafka", Elio ayaa sheegay in uu noqday "careysanahay maxaa yeelay, xoolo shubayso dalka".
"Waxaan ku idhi, Waxaan doonayaa in la dhiso a $5,000 gaariga in uu helo 65 miles per gallon,"Ayuu Yeeray. "Waxaan lahayn xogta gadaal in kor. Waxaan ka shaqeeya dhibaatada bilaabay. Weli waxaan qabaa in a $5,000 baabuur ay noqon lahaayeen tiro sexy. Laakiin sida Architecture bilaabay horumarinta iyo waxaan bilaabay kulan lala heshiiyo ganacsatada iyo binta helitaanka, waxaan ogaanay taasi ma yeelan karto wax badan oo ka mid ah sifooyinka in dadka ka fili lahayd. "
Wuxu qabaa, ganacsiga tafaariiqda auto u baahan yahay in la beddelo sababtoo ah ganacsatada ma aha hufan kharashka gaariga iyo maalgelinta.
"Waxaan qabaa in mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan waa habka ganacsiga jabay,"Ayaa sheegay in Elio, kuwaas oo sheegay in uu ku riyooday oo ku saabsan lahaanshaha shirkadda baabuur oo uu magaciisa ku dul tan iyo markii uu ahaa wiil dhalinyaro ah. "Gadashada ee gaariga waa ciyaar aad u weyn oo caynkaas ah, taas oo ah sababta aan u leeyihiin $6,800 tiradaasi. Haddii aad og tahay waxa aad rabto iyo ma jirto arrin maalgelinta, waa in aadan qaadan shan saacadood si ay u iibsadaan baabuur. "
Ra'yiga XTI Diyaaradaha qoreysa duushay toosan iyo degtey, kaas oo la baabi'iyo yaabaa baahida loo qabo in garoomada diyaaradaha, sida ay aasaasihii David Brody. XTI bixiyo Guardian la haya'ad alaabta this.
Sannad ka dib markii Elio bilaabay shirkad, Ku salaysan Denver David Brody dhacaysay off hoos uu jidka u gaar ah. uu xawaaladaha, XTI Diyaaradaha, hormariyey fikirka ah jet ganacsiga lix kursi umado sida diyaaradaha rakaabka caadiga ah, laakiin la maroojin ah - waxay sidoo kale qaadataa off iyo beero vertical.
Shirkadda ayaa TriFan 600 jet adeegsanayaa saddex taageerayaasha ducted for liftoff toosan. Ilbiriqsi ka dib markii ay duushay, laba taageerayaasha garabka r weeraryahanka otate lagu baddalo u didin siman. taageere A dhajinta in ay xiranto sooctey. Marka ay timaado waqti si ay u soo xerogeliyaan, habka ciyaara baxay oo cagsi ah.
XTI ayaa sheegtay in diyaarad uu noqon doono long-range vertical-duushay diyaarad ugu horeeyay ee ganacsi. Shirkadaha kale ayaa sidoo kale horumarinta technology vertical-duushay. In June, Boeing muujiyeen duushay u dhow-toosan ee Dreamliner ah.
Brody helay dhimbiil of waxyoonay ku saabsan toban sano ka hor, markii wiilkiisii ​​ahaa 10 sano jir ah iyo guriga keenay arrin of Time magazine. Isaga oo xusuusanaya waxaa ka mid ahaa maqaal ku saabsan ganacsade ah isku dayayaan in ay horumariyaan jet a mini in ay qaadan kartaa off iyo dalka vertical.
"Taasi helay iga fekerayo,"Brody sheegay in. "Haddii aad eegto wixii dhacay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay marka la eego horumarka qalabka: waxaan leenahay qalabka lagu shido oo ay leeyihiin horumarka la taaban karo ee matoorada diyaaradaha. jet waxa uu leeyahay laba matoorada turboshaft, oo lagu daray horumarka ee technology computer ayaa loo oggol yahay controllability kale oo badan iyo xasiloonida diyaaradaha iyo sidoo kale ka fogaanshaha dhaceen. Qaar ka mid ah technology ee gaariga driverless malaha ciyaari doonaan door ku diyaaradaha ee mustaqbalka. "
Brody ayaa aaminsan in mustaqbalka diyaaradda dhexdhexaad ganacsi noqon doontaa in duushay toosan iyo degtey. technology The baabi'iyo lahaa kharashka dhismaha iyo garoonada diyaaradaha dayactirka la runways dheer. Waxa kale oo laga yaabaa duulaya xitaa more la heli karo iyadoo la abuurayo adeegyada taxi hawada ah in aad soo qaado aan ka fogayn guriga hadii aan albaabka hore.
XCOR Lynx baabuurta suborbital looga golleeyahay in lagu qaado rakaab oo ku saabsan safarada gaaban cidhifka bannaan. Shirkadda bixiyo Guardian la this video haya'ad xayaysiis.
xuduudda kama dambaysta ah ganacsadaha gaadiidka a, Dabcan, waa mid ka baxsan dunidan. California ku salaysan XCOR Aerospace ayaa ku soo bilowday tigidhada duulimaadyada ay taxane Lynx baabuurta suborbital iibinta, taas oo qaadan doona rakaab ah iyo payloads on kor u safrayaan bannaan in a 330,000 cago socdaa saacad ka yar.
Rakaabka muhiimad ahaan doonaa co-pilot on safarka - rakaabka oo kaliya kale oo ku saabsan safar jirin duuliyaha. sida oo kale, Kuwaas waxaa la Siiyey doonaa ah "calaamad call" iyo inay awoodaan inay u arkaan meel marayo Cirkana dhismo qol Lynx in siineya aragtida ballaaran oo meel bannaan oo noqon doona.
Gaariga waxaa ku shaqeeya by matoorada gantaal isticmaali karo in ay maamulaan on shito iyo oxygen dareere.
"At muhimka ah ee waxa aan horumariyo at XCOR waa engine a gantaal si buuxda u isticmaali karo,"Ayuu yiri xubin ka tirsan guddiga Michiel Mol. "Taasi ma muuqan kara cajiib ah, laakiin waxa run ahaantii waa. gantaal kasta oo kale oo soo baxay waxaa jira isticmaalka hal mar oo kaliya. Waxaan leenahay waxa aynu u qayshanno reusability deg dega ah. Our engine duuli karto, hoos u taabto oo tag on. "
sida oo kale, weel Lynx karo, ayuu yidhi, rakaabka ah ku qaadan muhiimad soohdinta reer bannaan. XCOR envisions bilaabo duulimaad imtixaanka xagaaga mararka soo socda oo iyaga ridaya ganacsi isticmaalka lix ilaa 12 bilood ka dib, iyadoo duulimaad ganacsi bilaabo suurto gal ah in 2017.
Shirkadda ayaa hore u iibiyey dhawr boqol oo tikidhada, inta badan macaamiisha ah ee niyadda u ah meel. (Oo kii aan lacag ku qaataan: tikidhada yihiin $100,000 halkii diyaarad.)
"Waan arki cir kasta oo ahayd in ay meel bannaan oo ka soo isagoo lahaa khibrad noloshii wax ka badalaysa,"Mol ayaa sheegay in. "Marka aad halkaas tahay in madowga ah meel, eegaya this meeraha yar buluug ah oo leh a siyasad cagaara oo dhalaalaya iyo daaha yar oo jawiga ku wareegsan, waxa ay u muuqataa si nugul ka baxsan. Waxa aad ka dhigaysa mid ergo ah, waayo, dhulka laftiisa. "
Mid ka mid ah guud in ay caddaato marka la hadlaya ganacsatada kuwan oo kale ah waa sida ay u fiirsadaan hamiga ay sida inevitabilities.
Dhamaantood – oo ma dadka kale shaki ku meel gaadiidka – eegto xaaladda marka ay timaado sida aanu u hesho: halkaan ilaa halkaasaad maanta suuragal ahayn, in wax la bedelaa – iyo in jetpacks iyo weelashii suborbital fog yar ee bet ah halis u ahayn waxba samayn ama uga faaidaysan yar in fikradaha jira.
Mol ayaa sheegay in mustaqbalka gaadiidka ayaa sidoo kale ku lug leedahay fikradaha iyo naqshado aannu u badan tahay xitaa ma uuraysan karaa of maanta, maxaa yeelay baahida tomorrowwill ahaan si aan caadi ahayn.
"Waxaan qabaa in Dadka waxaa mar walba isku dayayaan si aad u hesho xuduudaha iyo tag u socday,"Ayuu yiri. "Waxaan qabaa in mustaqbalka fog waxaan doonaa in la nool on meerayaasha badan sida noocyada a. Waxaan aaminsanahay in ahay, haa. Malaha ma in our noolaa, in kastoo. "
31015	0 Andy Meek, Qodobka, warshadaha Automotive, Ganacsiga, Deegaanka, Features, Technology, Tesla, Mustaqbalka gaadiidka, Safarka iyo gaadiidka, US news, news World
← imtixaanka Facebook-style Snapchat chat is-destructing in Rasuulka Sidee smart boorsooyinka gudbin safarka hawada →